Tsy nampandry saina ahy io boky io
"Fa ny raiko aman-dreniko efa nahafoy ahy; fa Jehovah kosa no mandray ahy. Salamo 27:10 Jehovah no Mpamonjy ahy, ka tsy hatahotra aho; inona no azon’ny olona atao amiko?" Hebreo 13:6
«Hatramin’ny fahazazako, dia fahadisoam-panantenana hatrany no niainako. Toa tsy tian’ireo ray aman-dreniko aho, ka nitady fitiavana teo amin’izao tontolo izao. Nikatsaka hahazo fahasambarana tao amin’ny mozika sy ny zava-mahadomelina aho. Mpiasan’ny kaominina aho, ary toa milamina ny zava-drehetra, raha jerena ety ivelany. Ny tao anatiko anefa dia helo, vokatry ny fiankinan-doha amin’ny zava-mahadomelina. Indray andro aho dia voasambotra ary nampidirina am-ponja tany Munich. Noheverin’ny mpitsabo aho fa tsy ho velona intsony. Vonton’ny zava-mahadomelina mantsy ny tenako manontolo, ary azon’ny tazovony aho. Namonjy ahy tsy ho faty anefa Andriamanitra. Mbola velona aho, taorianan’ny herinandro iray tena mafy nanalana ahy tamin’ny zava-mahadomelina, kanefa dia nanohy ny fiainako toy ny teo aloha ihany. Mandra-pahitako Baiboly iray. Nasitriko tany anaty lalimoara tao amin’ny efitranon’ny fonja nisy ahy ilay izy, satria tapa-kevitra tsara aho ny tsy hamaky azy.
Nahagaga anefa, fa tsy namela ahy handry saina io boky napetrako tao anaty lalimoara io. Farany dia noraisiko ihany ilay izy, nosokafako, ka nanohina ahy mafy ny teny novakiako. Voalaza ao fa Andriamanitra no Ilay Tompo, Ilay Mpanjaka. Izy no Tompo mahery Tsitoha, Tompo mpiady mahery. Ary voasoratra fa io Tompo io no miandany amiko, ka tsy hatahotra aho (vakio ny Salamo 25 sy 118).
Rehefa namaky ireo teny ireo aho dia nitomany, satria nandritra ny fiainako manontolo aho dia niady mba hahita olona miraharaha ahy sy tia ahy. Dia nivavaka aho: «Andriamanitra ô, raha tena te hiady ho ahy tokoa Ianao, dia te hanatona Anao aho.» Tamin’ny volana aogositra 1986 izay. Hatreo aho dia nanomboka nahafantatra kokoa an’Andriamanitra, ary nanafaka ahy Izy. Mankasitraka Azy amin’ny foko manontolo aho.»